PVTV(Public Voice Television) ၏ ရုပ်သံအစီအစဉ်များအား Mizzima နှင့် DVB ရုပ်သံလို… – PVTV Myanmar
PVTV(Public Voice Television) ၏ ရုပ်သံအစီအစဉ်များအား Mizzima နှင့် DVB ရုပ်သံလိုင်းများတွင်လည်း ဖမ်းယူကြည့်ရှှုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် မည်သို့ပင်အခက်အခဲ ရှိပါစေ ပြည်သူ့အသံများပဲ့တင်ထပ်မြည်ဟည်းနိုင်ရန် PVTV အဖွဲ့သားများက အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုပါသည်။
Like – 24K Share – 2375
Lucky PA says:
အကို တို႔ မွာလဲ လႊင့္ မွာလားဟင္….
ဒါ​တွေအတွက် NUG ဘာလုပ်​နေတာရှိလဲ
ပုံက CRPH နဲ့ NUGမှာ မန့်မရလို့ ဒီမှာလာမန့်တာ
Twitter မှာပြန်တင်ပေးကြပါ ဒီလောက်တော့လုပ်ပေးကြပါ
These youths were abducted on Apr 17 night and this morning from Yankin, Yangon. They were brutally tortured. This photo is proof.
2021-04-18 at 9:27 PM
Mizzima နဲ့ DVB တစ်ကယ့်ကိုပြည်သူ့ မီဒီယာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Wathone Moe Set says:
နယ်ဘက်က အင်တာနက်မရှိဘဲ Mizzima နဲ့ DVBပဲ အားကိုးနေရတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ
Chit Myat Noe says:
လုပ်နေမှန်း ကြိုးစားနေမှန်း သိတယ်။ နားလည်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်ကလည်း တစ်နေ့ တစ်နေ့ မိစ္စာတွေလို နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ PDF ကို အမြန်ဆုံး ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ လူထုရဲ့ morale ဆိုတာ ကုန်းကောက်စရာတောင် မကျန်တော့ဘူး။ ဒါလေးကိုပဲ မျှော်လင့်ပြီး တစ်နေ့ တစ်နေ့ အားတင်းနေရတာပါ။
Arkar Htun says:
Radio လွှင့်နိုင်ဖို့လည်း လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Sharitari Buwonnaditara Dammaris says:
Radio AM​လေး လုပ်ကြဦးတူ​မောင်တို့
​ကျေးလက်လူ​တွေက နား​တွေ မျက်စိ​တွေ ကန်း​နေပြီ
2021-04-18 at 9:53 PM
Please Youtube မှာလဲတင်ပေးပါ
Local analog မှာ ရောက်သလောက် ပြန်လွင့်ပေးမယ်ဗျာ
2021-04-18 at 10:00 PM
မထားကြပါနဲ့တော့…၀န်ကြီးတွေထဲက တချို့သူတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ ပြန်မတောင်းပန်ရင်တောင် အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါတော့…တစ်ခုလေးမှတ်ထားပါ…ဗမာတွေမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး.. popular လောဘမှာ မသာယာပါနဲ့…
Pig Lay says:
2021-04-18 at 10:14 PM
Cannel * ရလား
2021-04-18 at 10:15 PM
These two girls were brutally beaten up, abducted and taken by MilitaryJuntas! Asawoman , I condemn beatings, harassments and sexual attacks to valued women! Military Juntas has been abusing us everyday and it’s getting worse! Please pray for us and speak for everyone from my country, Myanmar!
K Khaing Moe says:
ျမန္ျမန္လုပ္ၾကပါေတာ့႐ွင္ ကေလးေတြလည္း မစာမနာကို ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံေနရတာ မ်ားလွပါၿပီ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ထားပါတယ္ ျမန္ျမန္ေလးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါေတာ့႐ွင့္
2021-04-18 at 11:23 PM
PSI စလောင်းဆိုရင်တော့ ဖြုတ်ထားတော့ကြည့်မရဘူး။ တခြားစက်တွေကပါရရင်တော့မဆိုးဘူး
Free to air ဆို အရမ်းကောင်းပါတယ်
2021-04-19 at 4:57 AM
Mizzima နဲ႔ dvb ဖမ္းမရပါ
အမွန္တရားဘက္မွာ ရပ္တည္ေသာ မီဒီယာ မ်ား စုစည္းမိၾကတာ ၀မ္းသာစရာပါ
Tin Tin Mon says:
Naing Win Htun says:
2021-04-19 at 10:42 AM
အခုရက်ပိုင်းတောင် Mizzima. VOAအဲ့လိုလိုင်းတွေမကြည့်ရဲသေးဘူး ခွေးတွေကလမ်းထဲ သေနတ်ထမ်းပြီး တိတ်တိတ်လေးရောက်လာတတ်လို့
2021-04-19 at 10:53 AM
မင်းတို့ကလည်း youtubeမှာတောင် မတင်နိုင်ဘူးလား
2021-04-19 at 11:09 AM
2021-04-19 at 11:24 AM
Tin Aung Myint says:
2021-04-19 at 1:28 PM
Daw Mar Mar Aye says:
2021-04-19 at 2:54 PM
Thank you PVTY
2021-04-19 at 6:59 PM
Mizzima နဲ DVB ကို့တစ်ကယ့်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်😍🙏🙏🙏
2021-04-20 at 2:58 PM
2021-04-20 at 5:46 PM
ဗိုလ် တေဇ says:
2021-04-21 at 10:36 AM
2021-04-22 at 8:39 AM
2021-04-23 at 10:06 AM